Buy 720 Degree Android Camera (53,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
720 Degree Android Camera
ကြည့်သူအရေအတွက်: 140 (+2)
# Android Smart Phone နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မြင်ကွင်းကျယ် Photo များ၊ Video များကို တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ 720 degree Camera လေးပဲဖြစ်ပါတယ်…
# သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အုပ်စုလိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါ Camera မှာ လူ မဆန့်တာတွေ၊ ဝေးလွန်းတာတွေကြောင့် focus မပြတ်ဘဲ ရုပ်ထွက်မကြည်တာမျိုးတွေ မဖြစ်ရလေအောင် 720 Degree Android camera လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
# မြင်ကွင်းကျယ်မှာ ဘေးပတ်လည် 360 degree ဖြစ်ရုံသာမက အပေါ်အောက် 360 Degree ရတာကြောင့် အခြားသော camera များထက် သာလွန်တာကို တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်..
# Camera ရဲ့ Resolution က HD ထက်သာလွန်ပြီ Videoရိုက်လျှင် 2560 x 1280 (some cell phones support 3008 x 1504) ဖြစ်ပြီး Photo ဆိုလျှင် 3008 x
.l0 931504(3k) နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
# သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Selfie ပဲဆွဲမလား??? ခရီးသွားရင်း Video အဆန်းလေးတွေပဲ ရိုက်ကူးမလား?? Photo ရိုက်မှာလား?? ရိုက်ချင်တာရိုက် 720 degree ဖြင့် ရိုက်ကူးမှာဖြစ်လို့ အလန်းတကာ့အလန်းဆုံးတွေ ကို ခံစားရမှာ..
# ယနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းအသုံးပြုနေကြသော Social Media များဖြစ်တဲ့ Facebook, Instagram နဲ့ အခြားသော media တွေမှာ camera ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြီး video call ပြောချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် Photo ရိုက်ချင် တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လူတိုင်းသဘာကျမှာ သေချာပါတယ်…
# Type C ဖြင့် အသုံးပြုရသော Android Smart Phone တွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် ခေါင်းလေး2ခုပါဝင်ပါတယ်နော်…
Android App Download – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.via.vpai
ဈေးနှုန်း – 96000 Kyats
အမည်: 720 Degree Android Camera